Qorshaha Dowlad Deegaanka Soomaalida uga yaal is ballaarinta TPLF | Dhacdo
Home Wararka Maanta Qorshaha Dowlad Deegaanka Soomaalida uga yaal is ballaarinta TPLF
Qorshaha Dowlad Deegaanka Soomaalida uga yaal is ballaarinta TPLF
Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ka qayb qaadan doonaan dadaalada ay Dowladda Federaalka kooxaha fallaagada kaga difaaceyso Magaalada Addis Ababa.
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) oo xalay kulan isugu yeeray Odayaasha Dhaqanka, Waxgaradka iyo Culima’udiinka ayaa u sheegay inaanay suggi doonin, inta TPLF ka qabsaneyso Magaalada Jigjiga.
Suldaan Cabdiraxmaan Muxumed Carab oo ka mid ah xubnihii la kulmay Madaxweynaha ayaa sheegay in ay ka wada hadleen xaaladda ka taagan dalka Itoobiya iyo sidii ay Soomaalidu ugu midoobi laheyd aragtideeda qowmiga ah.
“Madaxweynaha kalmadda uu dhigay waxa ay ahayd in aanay noqoneynin meesha lagu hardamo ee lagu dagaalamo, haddii ay isku dayaan xoogaga dhul ballaarsiga wada, inaanay Jigjiga noqoneynin oo aanay Deegaanka Soomaalidu gudahiisa noqonin buu Madaxweynuhu soo dhigay. Taas mid cad bay ahayd. Keligii ra’yi uu qabana ma ahayn ee guud ahaan indheergaradka meesha fadhiyay ra’yi uu qabay bay ahayd.” Ayuu yiri Suldaan Cabdiraxmaan Muxumed Carab oo BBC la hadlay.
Waxa kaloo uu yiri “Xoogaga dhul ballaarsiga wada ee deegaanadoodii inta ay soo dhaafeen isku dayaya inay u gudbaan deegaano kale. Caasimadda Addis Ababa waa magaalo la wada leeyahay oo dastuuriya oo qowmiyadaha dalka oo dhan ka dhaxeysa. Dagaalku hadduu soo gaaro ma aha mid qowmiyad ah ee waa mid taabanaya masiirka ummadda Soomaaliyeed.”
Suldaan Carab ayaa intaa ku daray “Dowladda Federaalku mid ay qowmiyad gaar ahi leedahay ma aha, Dowladda Federaalku waxa weeye dowlad la wada dhistay oo la wada leeyahay. Taas micnaheedu ummadda Soomaaliyeed masiirka ay dowladaas ama tashiga heer qaran ee jira doorkayaga qowmigaa ku leenahay. Meesha loogu tashanayo dalkan ee tashigu uu ka go’o qowmiyad gaar oo xaq u lihi ma jirto. Qowmiyad tashigaa iyada la timaado ama laba qowmiyadood ama saddex qowmiyadood masiirka Itoobiya meel ay keligood hoggaamin karaan ma jirto, mana rabno ka qowmiyad ahaan, waxgarad ahaan ama xukuumad ahaan isku wada darba, in aanu noqono meel qowmiyadda labaad ee ugu badan nala yiraahdo ee tashiga halkaa ka jira inaan qaybtayada ka ahaano, haddaanan ka ahaanaynina oo aan u aragno inay maslaxadda Itoobiya jiritaankeedu uu khatar ku yahayna inaan tashan karno, mid cad weeyaan.”
Jabhadaha ay ugu tunka weyn yihiin TPLF iyo OLA ayaa qorsheynaya, haddiiba ay xukunka ka tuuraan Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed inay yeeshaan doorka hoggaamineed ee dib-u-dhiska dalkaasi.
Previous articleDigniin adag oo loo jeediyay shacabka Magaalada Kismaayo
Next articleWasiirka Arrimaha Dibadda oo la kulmay Wakiilka Midowga Afrika ee dalka